फेसबुकको कमाल : विश्वकै होचि मोडलका तस्विर भाइरल बन्यो – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी मनोरञ्जन / फेसबुकको कमाल : विश्वकै होचि मोडलका तस्विर भाइरल बन्यो
फेसबुकको कमाल : विश्वकै होचि मोडलका तस्विर भाइरल बन्यो
ICT Khabar/आइसिटी खबर March 23, 2018	आइसिटी मनोरञ्जन, लाइफ स्टाइल, सोसल प्रोफाइल Leaveacomment 573 Views
आयो टाढैबाट सेक्स गर्न मिल्ने प्रविधि, कसरी सम्भब ?
युट्युबले हटायो ५ करोड भन्दा बढी भिडियो
एजेन्सी । विश्वकै होचि मोडल ड्रु प्रेस्टा पछिल्लो समयकी ब्यस्त मोडल हुन् । जन्मिदै ‘एकोन्ड्रोप्लासिए’ रोग लागेका कारण शरीर नबढपछि उनी २१ वर्षको किशोर अवस्थामा पनि जम्मा ३ फुट ४ इन्च उचाईका साथ संघर्ष गरिरहेकी छिन् ।
उचाई नभए पनि सबै पिडा र दुख बिर्सिएर ‘मोडलिङ’ गर्ने सोच बनाएर ‘फोटोसुट’ गरे लगत्तै उनलाई पछाडी फर्केर हेर्नु परेको छैन ।
कदले सानी भए पनि बहुआयामिक प्रतिभाका कारण उनी विश्वभर चर्चामा छिन् ।
प्रेस्टाले आफ्नो इन्स्ट्राग्राममा पोष्ट गरेको फोटोसुटले उनलाई मोडल बन्न सहयोग मात्र भएन उनको छोटो समयमा नै परिचय बन्यो । मोडलिङमा सफल हुनलाई मानिसको कद र फरक प्रकृतिले नरोक्ने प्रमाणित गर्न उनले आफ्ना तस्विरहरुले समेत साथ दिएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
Previous तपाईको फेसबुक अरुले नै चलाइरहेको छ कि ? यसरी चेक गर्नुहोस् तुरुन्तै थाहा हुन्छ
Next सोफियाको जवाफ मानिस बौलायो भने बन्द गर्ने कुनै स्विच छ
अब आफ्नै जीवनसाथीको निगरानी एपसबाट यसरी
अब आफ्नो पार्टनरको विषयमा पनि एपको माध्यमबाट निगरानी राख्न सकिन्छ । यो एपको माध्यमबाट दोस्रो ...